Maxaa keena kala tagga Lamaanaha? (AKHRISO) - Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»Maxaa keena kala tagga Lamaanaha? (AKHRISO)
Waxyaabaha keenay kala tageena way badan yihiin, qaabab iskumid ah, kuwaas oo kala taga keena. Dabeecadaha xidhiidhka iyo waxayaabaha keenay kala taga ayaa saamayn ku yeeshay sidii loo qaabili lahaa xaalada nolosha cusub. Kalatagaas qofka kale wuxuu u arki karaa nefis ah inay dhammaatay marxaladii adkayd, qofka kalena waxay u tahay murugo qotodheer iyo amaan darro. Kala tagu wuxuu noqdaa mid hore looga gudbo labada qofba qof walba iyo taagtiis, taasoo ay lamaanuhu u arki karaan kala taga qofba si.
”Kala tagu waa isbedel weyn halkan sida loo arko. Kalataga lamaaanuhu waxay keentaa kalatag ah dhanka dareenka, dhaqaalaha iyo hantida ay wada wadaageen.”
Dhammaanshaha xidhiidhka waxaa la dareemi karaa guul darro iyo qoonsimaad. waxay keeni kartaa ceeb, eed iyo weliba saamayn dhanka sharafta. Maxaa khalad ah oo aan sameeyey? Sideen uga hortegi karaa arrintan? Isbedelka dhanka nolosha waxay keeni kartaa waxa loo yaqaan dhibaatada xaalada nolosha, taas oo micnaheedu yahay kala guurka la xidhiidha kala wareega marxalada nolosha iyo dareemada la xidhiidha. Ka tegida wixii hore waxay leedahay marwalba murugo.
Xaalada kala taga iyo dareenada la xidhiidha waxaa la dareemi karaa dareen isku dhex yaacsanaan ah. Xaalada nolosha ee cusub waxay keeni kartaa kelinimo, cidlonimo iyo dareen rajo la’aan iyo cabsi ah. Sidee isu deberaa? Sideen u maareeyaa lacagaha? Khaasatan markii kala tagu si lama filaan ah u dhaco ama ay timaado tusaale ahaan daacad darro. Dhammaanshaha xidhiidhka lamaanaha wuxuu sababi karaa dareen naxdin weyn leh. Kala tagu wuxuu noqon karaa dhibaato adag. Si loo maareeyo dhibaatada adag waa in la raadshaa caawimaad.
Saamaynta kala tagu ku reebo caruurta waa mid welwel leh inta badan. Cunug kasta ficil celin ayuu la yimaadaa markii labadiisa waalid kala tagaan. Sideedaba kala tagu ma aha mid saamayn weyn ku yeesha cunuga, sabatoo ah arrinta ugu muhiimsan ee aragtida cunugu waa dareenka uu qaadayo, taasoo ilmuhu ku barbaaro lana koro. Xaalada qoyska waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay caruurta furniinka ka hor. Mushaakilada waqtiga dheer waxay ka abuurmaan inta badan xaaladahaas, taasoo la xidhiidhey mushaakilaad hore ee qoyska caruurta leh, sida muran joogto ah iyo dagaalka qoyska.
Maxaad ka taqaan hab-dhaqanka dad qaar?
UGAAR AH DUMARKA: 5 Calaamadood Oo Lagu Garto Ninka Naagaha Badan
How to end a relationship without breaking your partner’s ego
3 things every man is worried about on his first date